Wiilkaan waxaa lagu haystaa da’diisa oo Sweden waa laga musaafurinayaa | shumis.net
Home » News » Wararka » Wiilkaan waxaa lagu haystaa da’diisa oo Sweden waa laga musaafurinayaa
Wiilka lagu magacaabo Sharmaki Abubakar oo aan sanadkii hore soo qornay in laga musaafurinayo Sweden ayay xitaa maxkamada sare ee Socdaalka (Migrationsöverdomstolen) diidmo siisay. ka dib markii ay Laanta Socdaalku (Migrationsverket) sheegtay in uusan 15 sano jir ahayn balse uu 21 jir yahay. Wiilkaan ayaa loo celinayaa Talyaaniga oo faro ka soo qaaday, sida uu qoray SVT.
Balse mid ka mid ah dhaqaatiirta baaritaanka ku samaysay wiilkaan oo lagu magacaabo Barbro Westerberg ayaa sheegtay in aysan macquul ahayn in wiilkaan uu 21-sano jiro isla markaana qiyaasteeda ay tahay in uu 15 ama 16-sano jir yahay oo uusan wali qaarngaar ahayn. Haweeneyda lagu magacaabo Erika Johannesson oo ahayd masuulka wiilkaan ayaa sanadkii hore laga wareejiyay masuuliyadaas ka dib markii Migrationsverket ay go’aamiyeen in uu wiilkaan yahay qaangaar aan u baahnayn masuul.
Balse Erika Johannesson oo wali caawimaad siisa Sharmake ayaa ku doodaysa in haddii Sharmarke lagu celiyo Talyaaniga uu ka midnoqonayo ciyaalka dariiqada ku nool isla markaana uusan awoodin in uu isdabaro. Markii go’aanka ay ka gaareen Migrationsverket ayaa Sharmake laga saaray gurigii uu deganaa ee dhalinyarada lagu hayo. Ka dib ayaa la geeyay guri ku meel gaar ah oo dadka waaweyn ku noolyahay balse halkaasi ayuu la qabsan waayay.
Sharmake oo hadda ku nool degmada Mellerud ayaa dhigta fasalka 8-aad ee dugsiga lagu diyaariyo caruurta qaxootiga ah, iyadoo ay iska muuqato in uusan ahayn nin 21-sano jir ah balse Migrationsverket iyo maxkamada sare ee Socdaalka ayaa sheegay in aysan kiiskiisa dib u eegeyn maadaama uu sharci ku leeyahay Talyaaniga isla markaana ay horey u qiimeeyeen da’diisa. Markii uu soo galay Talyaaniga ayaa Sharmake waxay u qoreen in uu dashay 1995 taasoo keentay in diidmo laga siiyo Sweden. Inkastoo sadex dhaqtar ay cadeeyeen in uu wali yahay caruur.
Title: Wiilkaan waxaa lagu haystaa da’diisa oo Sweden waa laga musaafurinayaa